Bhaibheri Rasara Nenguva Here? Zvinotaurwa Nevesainzi, Vezveutano, uye Bhaibheri
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPoland Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
BHAIBHERI HARISI BHUKU RESAINZI, ASI PARINOTAURA NYAYA DZESAINZI, RITORI KUMBERI. ONA MIENZANISO IYI.
Denga nenyika zvine pazvakatangira here?
Dzimwe nyanzvi dzesainzi dzaiti hazvina pazvakatangira. Iye zvino vakawanda vavo vava kubvuma kuti denga nenyika zvine pazvakatangira. Bhaibheri rakanga ragara razvitaura kare.—Genesisi 1:1.
Nyika ine shepi yakaita sei?
Kare vanhu vakawanda vaifunga kuti nyika yakati sandara. Mumakore ekuma400 B.C.E., nyanzvi dzesainzi dzekuGreece dzakanga dzava kuti nyika yakaita raundi. Asi izvi zvakanga zvanyorwa kare muBhaibheri naIsaya, makore ekuma700 B.C.E., paakataura ‘nezvedenderedzwa renyika.’ Shoko raakashandisa rinogona kushandurwa kuti raundi.—Isaya 40:22.
Zvinhu zviri kumatenga zvinosakara here?
Nyanzvi yesainzi yainzi Aristotle yakararama makore ekuma300 B.C.E., yaidzidzisa kuti zvinhu zviri panyika chete ndizvo zvinosakara, kwete zviri kumatenga. Mafungiro iwayo akaramba aripo kwemazana emakore. Asi kumakore ekuma1800, nyanzvi dzesainzi dzakatanga kuona kuti zvinhu zvese zvinosakara; zviri kudenga nezviri panyika. Mumwe wenyanzvi idzi Lord Kelvin, akaonawo zvinotaurwa neBhaibheri nezvematenga nenyika parinoti: “Zvose zvazvo zvichasakara sezvinoita nguo.” (Pisarema 102:25, 26) Kelvin aibvuma zvinodzidziswa neBhaibheri kuti Mwari anogona kudzivirira zvinhu zvaakasika kuti zvisabva zvaparara zvachose.—Muparidzi 1:4.
Nyika nemamwe mapuraneti zvakagara pai?
Aristotle aidzidzisa kuti mapuraneti akaita zvekupfekana-pfekana uye kuti nyika ndiyo iri pakati pacho. Pakazosvika makore ekuma1700, nyanzvi dzesainzi dzakatanga kuona kuti nyeredzi nemapuraneti hazvina pazvakagara. Izvi zvakanga zvataurwa kare mubhuku raJobho rakanyorwa makore ekuma1400 B.C.E., kuti Musiki ‘akaturika nyika pasina chinhu.’—Jobho 26:7.
BHAIBHERI HARISI BHUKU REZVEUTANO, ASI PARINOTAURA NYAYA DZEUTANO, RITORI KUMBERI.
Kuisa varwere kwavo vega.
Mutemo waMosesi waiti vanhu vane maperembudzi vagare kwavo vega. Vanhu vakawanda pavakarwara nezvirwere zvinotapuriranwa makore 700 akapfuura, vanachiremba ndipo pavakatanga kushandisawo nzira iyi uye nanhasi ichiri kushanda.—Revhitiko, chitsauko 13 ne14.
Kugeza maoko kana munhu abata chitunha.
Makore ekuma1800 asati asvika, kakawanda vanachiremba vaiti kana vakabata zvitunha, vonorapa varwere vasina kumbogeza maoko. Izvi zvakaita kuti vanhu vakawanda vafe. Asi Mutemo waMosesi wakanga watotaura kuti kana munhu akabata chitunha anenge asisina kuchena. Mutemo wacho waitoti munhu aifanira kugeza nemvura kuti achene. Mutemo uyu waibatsira chaizvo pautano.—Numeri 19:11, 19.
Gore negore, vana vanopfuura hafu yemiriyoni vanofa nechirwere chemanyoka, uye izvi zvinonyanya kukonzerwa netsvina yevanhu inongoraswa pese pese. Mutemo waMosesi waiti tsvina yaifanira kuchererwa pasi, kure nekunogara vanhu.—Dheuteronomio 23:13.
Mutemo waMwari waiti mwana mukomana aifanira kuchecheudzwa pazuva rechi8 kubva paanenge aberekwa. (Revhitiko 12:3) Ropa rekacheche rinonzi rinozokwanisa kugwamba zvakanaka kubva pakanosvitsa vhiki. Saka mutemo uyu wekumbomira kuchecheudza kusvika papera vhiki waibatsira chaizvo.
Kufara kana kusuwa kune zvakunoita pautano.
Nyanzvi dzeutano uye dzesainzi dzinoti kuva munhu anoonga, anofara, ane tariro uye anoregerera vamwe kunobatsira pautano. Bhaibheri rinoti: “Mwoyo unofara unorapa, asi kushushikana kunoomesa mapfupa.”—Zvirevo 17:22.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI Nhamba 1 2018 | Bhaibheri Richiri Kushanda Here?
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI Nhamba 1 2018 | Bhaibheri Richiri Kushanda Here?